NVIDIA သည် Android TV Box အသစ်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် Androidsis
မိုဘိုင်းပရိုဆက်ဆာများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ကတ်များကိုလူသိများသောထုတ်လုပ်သူများထံမှ Android ထုတ်ကုန်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်တွင်ပြီးပြီ၊ NVIDIA Shield Pro ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံး, ယခုမှာ console အကြောင်းမဟုတ်ဘဲအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပါသော Android TV Box အကြောင်းပြောရန်အချိန်တန်ပြီ။
ကျနော်တို့ကသူတို့ 2017 ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်အပေါ်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ features တွေနှင့်တကွကြွလာတော်မူသောမော်ဒယ်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ NVIDIA SHIELD ဟူသောအမည်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Play developer console တွင်ပေါ်လာသောအသစ်ထွက်သော version ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်၎င်းကိုလွှတ်တင်တော့မည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်သော Android TV Box ကိုလိုချင်သနည်း။ Fortnite ကစားနိုင်စေရန်
NVIDIA ကိုပြင်ဆင်နေသည်ကိုသင်မြင်သောအခါပထမဆုံးစဉ်းစားသင့်သည် တီဗီ Box ကို Android နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘာဖြစ်လို့ဒီအမျိုးအစားစက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာစွမ်းအားအများကြီးလိုအပ်ရတာလဲ။ အဖြေကတော့ Battle Royale ထဲကကြယ်ပွင့်ကစားပွဲမှာဖြစ်တယ်။ Processor ကုမ္ပဏီဆီကဒီ gadget အသစ်ကနေပြီးသင် Fortnite နဲ့ PUBG Mobile ကိုပြwithoutနာမရှိဘဲကစားနိုင်မှာပါ။
ဤလိုင်းများကို ဦး တည်နေသောပုံတွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း NVIDIA SHIELD TV Box အသစ်သည် ၁၀၀၀ Mhz ရှိပြီး Maxwell နည်းပညာပါရှိသော NVIDIA ပရိုဆက်ဆာဖြင့်ရောက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ NVIDIA Tegra X1.000 SoC နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်မှာရှင်းပါသည်။ Full HD resolution ကိုရောက်ရှိခြင်းဖြင့် Android 1 Pie ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ထုတ်လုပ်သူထံမှဤစပ်စုသော Android TV Box နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်၏စမတ်တီဗီတွင်အဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့် အသုံးပြု၍ Fortnite ကစားရန်သင့်အားအမှန်တကယ်ခွင့်ပြုပါကဂိမ်း၏အရည်အသွေးမြင့်တက်မှုမှာထူးခြားစွာရှိပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာဖန်သားပြင်ကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဖုန်းကို TV နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သော်လည်းစမတ်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ရန်နှင့်အဆက်ဖြတ်ရန်မလိုအပ်သောအရံပစ္စည်းများကိုတိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သဘောပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » NVIDIA သည်အံ့သြစရာကောင်းသည့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့် Android TV Box အသစ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
ဒီ update ကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မထင်ဘူး ၎င်းသည်လုံးဝဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သောဗားရှင်းများနှင့်လုံးဝမပြောင်းလဲပါ။ အများအားဖြင့်၎င်းသည် processor အကန့်အသတ်ရှိသည်ဟု panic buton မှတင်ပြသော overclock processor တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်သိုလှောင်မှုအမျိုးအစားကိုယူဆောင်လာမည်ကိုမဖော်ပြထားသည့်သိုးအဆင့်မြှင့်တင်မှုမရှိပါ။ ဒါကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဘာမှမရှိဘူး
Nonsense ဆောင်းပါးတွင်စာရေးသူအနေဖြင့် Nvidia Shield တွင်သူ၏လက်၌ဘယ်တော့မှမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ သူသည်တူညီသော processor နှင့်အတူတူပင် power ကိုလက်တွေ့တွင်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်မှသူမသိ, fullhd? အကယ်၍ လက်ရှိ Nvidia Shield TV သည် 4K HDR သို့ရောက်ရှိပါက! စာရေးခြင်း၏အကျိုးအတွက်ရေးသားခြင်းသည်သာစာမျက်နှာပေါ်တွင်သာသာမှုသာဖြစ်သည်။